Orlistat ntụ ntụ - Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu ọgwụ ọjọọ, ị kwesịrị ịma! | AASraw
/blog/Orlistat/Ebumnuche sitere na Orlistat maka ntụpọ ọnwụ-Ihe dị egwu ịṅụ abụba ị kwesịrị ịmara !!!
Ihe na 01 / 28 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Orlistat.
1.What bụ ndepụta aha? 2.Gịnị mere anyị ji họrọ Orlistat maka ndụ ndụ ka mma?
3.What bụ aha aha Olistat? 4.What bụ orlistat ntụ ntụ?
5. 6.Howụ ka orlistat ntụ ntụ ọrụ?
7.Orlistat ntụ ntụ Mechanism nke edinam 8.Gịnị bụ uru nke listi ngwakọ?
9.Olee ka m ga-eji orlistat ntụ ntụ? 10.Common dosage nke orlistat ntụ ntụ
11. Tupu i jiri orlistat ntụ ntụ 12.When ị na-ewepu ntụ ntụ
13.Anwere ike iji orulu komputa 14.Gịnị bụ mmetụta dị n'akụkụ nke orlistat ntụ ntụ
15.Orlistat VS Sibutramine Mpaghara 16.FA & Q
17.Price nke Orlistat na Olistat ntụ ntụ 18.Buying Olistat ntụ ntụ online
19.Howụ ka ịzụta ịdị ọcha dị elu Olistat ntụ ntụ si AAS
Orlistat raw ntụ ntụ video
|.Orlistat isi Characters:
Molekụla Formula: C29H53NO5
Ọbara arọ: 495.7
1.What bụ ndepụta aha?
Orlistat, Nke a makwaara dịka Xenical dịka aha aha maka aha Orlistat, nke eji ya na ọgwụgwọ ibu. O nwere mmetụta dị otú ahụ maka ụfụ dị ka sibutramine, clenbuterol, Orlistat na-egbochi ahụ gị ịghara ịbaba abụba site na nri ị na-eri. Site n'ibelata oke abụba nke a na-etinye na ya, Orlistat nwere ike inyere gị aka ịkwụsị ibu arọ karị. Ebe ọ bụ na mgbakwunye Orlistat nyere ndị mmadụ aka ịkwụsị ibu arọ ọ nwere ike inye aka igbochi ọnọdụ ahụike gụnyere oke na ibu oke. Ibu oke na-ejikọta ya na ọrịa 2 ụdị ọrịa shuga, ọrịa obi, ọbara mgbali elu, na ụra na-ehi ụra, nke nwere ike ịkpata nsogbu ahụike ọzọ. Ịkwụsị ibu arọ bụ otu n'ime ndụmọdụ ndị ọkachamara kachasị dị na ndị dọkịta mgbe ọ bịara ịbawanye ahụike na ogologo ndụ ogologo oge. N'ahịa, e nwere ụdị dịgasị iche iche site na listi akwụkwọ, na-adịkarị ka mpempe akwụkwọ, ụdị capsule, ụdị ntụ ntụ, ect.
2.Gịnị mere anyị ji họrọ Orlistat maka ndụ ndụ ka mma?
N'oge a, ibu ibu na - aghọ nsogbu nsogbu, ma ọ bụrụ na ibu oke, ị nọ n'ihe ize ndụ nke ịmepụta nsogbu ahụike dịka ụdị ọrịa shuga 2, welie cholesterol, ọbara mgbali elu, ọrịa obi na - akpata ọrịa obi, ọrịa ogbu na nkwonkwo, ọrịa cancer na nkwonkwo mgbu. mee ka abaghị uru ma ọ bụ na-ebucha,anyị na-emega ahụ ma ọ bụ na-aṅụ ọgwụ ọjọọ bara ụba. Ọtụtụ mmadụ nwere ike ịnwale mmega ahụ n'ihu, na obere mmetụta. Ịme obere mgbanwe dị mma na nri gị na ndụ gị nwere ike inyere gị aka ịkwụsị ibu ma belata ihe ize ndụ nke ịmepụta nsogbu ahụike a. ọgwụ ọjọọ,Olistat na-arụ ọrụ site na igbochi enzymes (lipases) site n'ịkụda abụba n'úkwù na ikwe ka ọ gafere n'ime ahụ ahụ. Nke a na - ebelata ọnụ ọgụgụ nke calories nke anụ ahụ na-etinye na ya. Ọ bụ ụdị ihe ọkụkụ sitere n'okike nke osisi, enweghi mmetụta ndị dị nro ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ, ma ọ bụ ndepụta, na-eri nri na-edozi ahụ, anyị nwere ike inwe ndụ dị mma .Nke mere ọtụtụ ndị hụrụ ya n'anya ma zụta Olistat.
3.What bụ aha aha Olistat?
Xenical na Alli bụ aha aha maka Orlistat. Xenical bụ nke Roche mepụtara ma nwee ihe mwepụ ọrụ Orlistat 120mg. Alli bụ aha maka Orlistat 60mg na ọ bụ ihe karịrị ọgwụ ntanetị. Alli bụ ọkara nke ike ọgwụ ọgwụ Orlistat 120mg, Alli, na Xenical.Medically ọ dịghị ihe dị iche n'etiti ha, Orlistat na-adịkarị na ọnụ ala.
4.What bụ orlistat ntụ ntụ?
Orlistat ntụ ntụ bụ ntụ ntụ ntụsara ahụ, bụ ụdị ntụ ọcha, 99% dị ọcha. Dịka anyị niile maara, n'agbanyeghị ụdị ọgwụgwọ, enwere mmetụta ụfọdụ n'ahụ ahụ, ebe ọtụtụ n'ime nkwụsịlata ịgwọ ọrịa bụ nnọọ nnukwu ihe na - emerụ ahụ mmadụ, ma ọ bụ ndepụta aha ya dị ka mkpụrụ osisi, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe kachasị na - emebi ahụ, ọ bụ ihe kachasị mma n'ahụ. dị ka n'okpuru:
Aha: orlistat ntụ ntụ
Ụdị Mkpụrụkpụ: C29H53NO5
Molekụla arọ: 495.7
Ntọala Melt: 50 Celsius C.
Nchekwa: 2-8 ° C.
A na-amụrụ ọtụtụ nkuzi nke akwukwo Orlistat ọtụtụ ọtụtụ nsogbu. N'elu data ikpe-ajuju, ọnụọgụ ihe dị arọ na Orlistat ma e jiri ya tụnyere placebo na nri, bụ 50 percent elu. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ike idafu 6 n'arọ na nri mgbe niile, ị nwere ike ịdaba na 9 n'arọ na Orlistat. Ọzọkwa, e gosipụtara na ndị na-ewere Orlistat nọgidere na-enwe mmetụta dị njọ karịa ebe a na-edebe placebo. Iji nweta kachasị irè site na Orlistat, a ga-ewere otu capsule na nri ọ bụla (kachasị nke 360mg n'ụbọchị), tupu, n'oge, ma ọ bụ ruo 120mg (a capsule) awa mgbe ọ bụla nri. Ọ bụrụ na ịchọta nri ma ọ bụ nri anaghị eri abụba ọ bụla, ịkwesighi iburu ya.
6.Howụ ka orlistat ntụ ntụ ọrụ?
Orlistat ntụ ntụ na - arụ ọrụ n'ime obodo n'ime eriri afọ (eriri afọ) .Gịnị ka ọrụ orlistat na - arụ ọrụ site na igbochi enzymes (lipases) site na - agbajisị abụba na mkpịsị na - ekwe ka ọ gafee ahụ ahụ n'enweghị nsogbu. Nke a na - eme ka ọnụọgụ calorie dị nro. N'ihe atụ aro nke 120 mg ugboro atọ n'ụbọchị, Orlistat na-ebelata ikikere abụba site na 30 percent.Although Orlistat bụ ọgwụ na-efu dị arọ, ọ bụghị oke ọrụ nha ma ọ bụ ndepụta. ... Orlistat dị irè iji gbochie ịṅụchasị abụba nke nri gị nke ga-enyere belata gị oriri zuru ezu calorie. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ị belata calorie gị na-eri nri site na XLMNXX calories kwa ụbọchị.
7.Orlistat ntụ ntụ's Mechanism of action
Orlistat ntụ ntụ na-arụ ọrụ na-egbochi egbugbere ọnụ na nke pancreatic, enzymes ndị na-akụda triglycerides na eriri afọ. Mgbe a na-egbochi ọrụ lipase, a naghị atụgharị ya na ihe oriri na-edozi ahụ n'ime mmiri abụba bara uru na-adịghị emetụta, ma a na-emegharị ya n'enweghị agbanwe agbanwe. Naanị nchọta nke ndepụta aha na-etinye uche na nhazi; ihe kachasị emetụta bụ mgbochi egbugbere ọnụ mpaghara n'ime traktị GI mgbe ọ na-ekwu okwu ọnụ. Ụzọ bụ isi e si kpochapụ bụ site na feces.
Akpanwom akwukwo ahihia Orlistat ka achoputara na ochibido oria nke thioesterase nke fatty acid synthase (FAS), enzyme nke na-etinye aka na mkpokọta kansa ma ọ bụghị sel nkịtị. Otú ọ dị, mmetụta ndị nwere mmetụta sitere na Orlistat, dịka igbochi mkparịta ụka ndị ọzọ na-enweghị ike ma ọ bụ enweghị ike na-adịghị mma, nwere ike ibelata ngwa ya dịka onye na-elekọta antitumor. Otu nchọpụta proiling malitere usoro nlekọta nchedo nke na-achọ ka e nwee ihe ndị ọhụrụ na-achọ ịchọta, gụnyere ihe ndị ọzọ a chọrọ. Orlistat na-egosikwa mycobacteria na-eme ememe na Trypanosoma brucei parasite (Lee ịgụkwu ihe).
8.Gịnị bụ uru nke listi ngwakọ?
A na-ejikarị mkpụrụ osisi Orlistat eme ihe maka ịme Orlistat raw protein, orlistat capsule, iji mee ọgwụ dị iche iche maka oke abụba. Uru nke ngwongwo nkuchi na-enye ohere ka mmadụ hapụ 20% nke arọ ahụ na-efu na anụ ahụ adipose. Dị ka ọgwụ a na-egosi na ọ dị njọ, Orlistat nwere uru a na-apụghị ịgbagha agbagha karịa ọgwụ ndị ọzọ na-efu ọnwụ na ntụgharị nke uru uru mgbe ọ kwụsịrị ịgwọ ọrịa. n'ihi usoro kachasị elu nke arụ ọrụ ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ọgwụ ndị na-enweghị ọgwụgwọ, na-eme dịka ihe mgbochi megide uru uru, yana ọrụ dị mma ma wedata oke ọrịa dịka hypotension, ọrịa shuga, atherosclerosis na cholesterol.
N'oge a na-anwale ọnwụnwa maka ọrịa Orlistat raw powder arọ loss, karịa mmadụ 30,000 so na ọmụmụ ihe ahụ. Kemgbe nkwado ya, ihe karịrị nde mmadụ 13.5 ejiriwo Orlistat ma nwee nnukwu ibu. A na - edebanye aha Orlistat ka ọ bụrụ ọgwụ na-efu ọnwụ na mba 149 n'ụwa. Orlistat ntụ ntụ gụnyere:
• Na-ebelata ozu ahụ karịa 20% na-efufu anụ ahụ
• Na-enyere gị aka ịmụta otú ịgụ calorie
• Ọ na-enye gị mmetụta nke ọdịmma
• Ihe ọma ya na-enye ndị ọrụ ọrụ obi ike na ọṅụ
• Ọ na-enye nsonaazụ na-aga n'ihu ogologo oge
9.Olee ka m ga-eji orlistat ntụ ntụ?
Nri a na-abịa site na ntụziaka maka ọrịa iji mee ihe dị mma ma dị irè. Soro ntuziaka ndị a nke ọma. Jụọ onye dọkịta gị maọbụ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.
Orlistat raw powder bụ nanị akụkụ nke usoro ọgwụgwọ zuru ezu nke na-agụnye nri, mmega ahụ, na ịchịkwa oke. A na-etinye òkè gị kwa ụbọchị na abụba, protein, na carbohydrates na-eri nke ọma kwa ụbọchị. Soro nri gị, ọgwụ, na mmega ahụ.
Ngwurugwu a na-atụ aro nke Orlistat raw powder bụ otu 120mg capsule ugboro atọ n'ụbọchị na nri ọ bụla nwere abụba (n'oge ma ọ bụ ruo 1 hour mgbe nri).
Ọ bụrụ na ị na-eri nri ma ọ bụ na ị na-eri nri nke na-enweghị abụba ọ bụla, fesa ntinye ụbụrụ na-edozi ahụ maka nri ahụ.
Nri abụba nke nri gị kwa ụbọchị ekwesịghị ịbụ karịa 30% nke ụtụtụ caloric gị kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eri calories 1200 kwa ụbọchị, ọ bụghị karịa 360 nke calorie ndị ahụ kwesịrị ịbụ abụba.
Gụọ ihe niile ị na-eri, na-echebara ọnụ ọgụgụ nke servings kwa akpa. Dọkịta gị, onye na-enye nri na-edozi ahụ, ma ọ bụ onye na-edozi ahụ nwere ike inyere gị aka ịmepụta atụmatụ nri nri.
Dọkịta gị nwere ike ịkwado ka ị na-ewere vitamin na ihe nchịkwa ịnweta ma ị na-ewepụta ntụ ntụ. Ngwurugwu a nwere ike ime ka o sie ike ka ahụ gị nwee ike ịmịnye vitamin ndị nwere abụba, dịka vitamin A, D, E, na K. Soro ntuziaka dọkịta gị gbasara ụdị multi-vitamin ma ọ bụ ịnweta mgbakwunye iji mee ihe.
Were vitamin ma ọ bụ mgbakwunye gị n'oge ihi ụra, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala 2 awa tupu ma ọ bụ mgbe ị na-ewepụta ntụ ọka.
Echekwala na ụlọ okpomọkụ na mmiri na okpomọkụ. Debe kalama ahụ mechie. Kpochapụ ihe ọ bụla a na-ejighị na-emepụta ntụ ọka ntụhie mgbe ụbọchị ngwụcha dị na akara ọgwụ ahụ agafeela.
Leba anya na onu ogwu a na eji obo ohuru obula. Orlistat raw powder bụ ọgwụ nwere ike iji ya mee ihe dịka enyemaka dị arọ, ma ị kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eji ọgwụ gị eme ihe n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ na-enweghị ndenye ọgwụ.
10.Common dosage nke orlistat ntụ ntụ
Orlistat raw powder bụ nke a na-eji eme ihe dị ka capsule na capsule nke na-abụghị nke ederede. Ụdị usoro ọgwụ Orlistat bụ 120-mg capsule ugboro atọ n'ụbọchị. Were akwukwo ozo n'aha nri ma obu ruo 1 hour mgbe nri. Ọ bụrụ na eri nri ma ọ bụ enweghị abụba, ị nwere ike ịsacha ngwugwu gị. Soro ntuziaka ndị dị na labeling ọgwụ gị ma ọ bụ akara ngwugwu nke ọma, ma jụọ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ ike ịkọwa akụkụ ọ bụla ị na-aghọtaghị. Were nhazi akwukwo ozo dika achoro. Ejila ihe karia ma ọ bụ na-erughị ya ma ọ bụ buru ya karịa mgbe dọkịta gị nyere iwu ma ọ bụ kwuo na ngwugwu ahụ.
11. Tupu i jiri orlistat raw powder powder
Lelee ozi a .Ọ bụrụ na ị nwere onye ọ bụla nke na-agbaso mgbaàmà ahụ, enweghi ike ikwe ya:
Ị na-afụ ụfụ maka ịzụta ntụ ntụ ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla ọzọ.
Ị na-aṅụ ọgwụ ndị na-egbochi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị ka cyclosporine (Neoral, Sandimmune).
Enwerela ihe ịkpụ osisi ma ọ bụ na ị nwere cholestais (ọnọdụ a na-egbochi mmiri bile na imeju) ma ọ bụ ọrịa malabsorption (nsogbu na-emetụta nri)
Ị nwere ma ọ bụ nwee nsogbu iri nri dịka nervosa nervosa ma ọ bụ bulimia, ọrịa shuga, akụrụ akụrụ, pancreatitis (mbufụt ma ọ bụ ọzịza nke pancreas), ma ọ bụ gallbladder ma ọ bụ ọrịa thyroid.
Ị dị ime, na-eme atụmatụ ịtụrụ ime, ma ọ bụ na-enye gị ara. Ejila obere ntụ ntụ ma ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ na-enye ara.
akụkụ-akụkụ orlistat raw ntụ ntụ. orlistat ntụ ntụ
12.When ị na-ewepu ntụ ntụ
Kewaa ego nke abụba kwa ụbọchị, carbohydrates, na protein
Ọ bụ ezie na ị na-eburu oke ntụsara ahụ, ị ​​kwesịrị izere ihe oriri na-enwe karịa 30% abụba.
Mgbe ị na-eri anụ, ulo ozuzu (ọkụkọ) ma ọ bụ azụ, rie 2 ma ọ bụ 3 ounces (55 ma ọ bụ 85 grams) maka ọrụ, ọkpụkpụ anụ ahụ dị mma. enwekwu ọka, mkpụrụ osisi, na akwụkwọ nri. Dochie mmiri ara ehi na mmiri ara ehi ma ọ bụ 1% mmiri ara ehi na belata ma ọ bụ obere mmiri ara ehi.
Na-eme ka ọtụtụ vitamin A, D, E, K, na beta-carotene
Orlistat raw powder blocks absorption of some fat-soluble vitamin and beta carotene. Ya mere, mgbe ị na-eji orlistat ị kwesịrị ị na-ewere ihe kwa ụbọchị nke nwere vitamin A, D, E, K, na beta-carotene. Gaa akara ahụ iji chọta ngwaahịa dị iche iche nke nwere vitamin ndị a. Were multivitamin otu ugboro n'ụbọchị, 2 awa gara aga ma ọ bụ 2 awa mgbe ị natara orlistat, ma ọ bụ buru multivitamin n'oge ụra.
13.Anwere ike iji orulu komputa
Debe ọgwụ a n'ime akpa ahụ, mechiri emechi, Ebee ka ụmụaka ga - esi eru.
Na-echekwa ya na ụlọ okpomọkụ ma pụọ ​​na oké okpomọkụ, mmiri (ọ bụghị n'ime ime ụlọ ịwụ), na ìhè.
Ụzọ kachasị mma ị ga-esi jiri ọgwụ gị mee ihe bụ site n'usoro iweghachị ọgwụ kama iwepụ ọgwụ a n'ụlọ mposi.
14.What 's mmetụta dị n'akụkụ nke orlistat ntụ ntụ?
Ego ọ bụla nwere akụkụ abụọ ya, ọ bụ ezie na ntụpọ na-enweghị nkuzi dị irè, ọ pụkwara inwe mmetụta ụfọdụ, mmetụta ndị ọzọ na-emetụta ọkpụkpụ na-agụnye:
Abdominal ma ọ bụ afọ mgbu ma ọ bụ obi erughị ala
ihe isi ike na-agagharị
gas na mmeghari akwara
enweghi ike ijide igweghari
enwekwuwanye na mmeghari obi
nkwụsị nke ikuku ụkwụ
nke na-ahụ ụfụ nke uwe akwa
Sibutramine na-arụ ọrụ site na igbochi agụụ, gụnyere nkwụsị nke agụụ site na-eme ihe n'usoro ụjọ na ụbụrụ ime ka afọ kwenye na ọ bụ zuru, na-eme ka satty dịkwuo mma.
Xenical site na ya usoro-egbochi mode nke arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-abụghị usoro na akụkụ eriri afọ, ọ bụghị na-achọ ịbanye n'ime ọbara ma ọ bụ ụbụrụ. Ọ na-egbochi nchịkọta nke abụba na-eri nri site na igbochi mmechi enzyme dị mkpa maka ịgbanye abụba na-eri nri na ụdị mpempe akwụkwọ ya.
Ibu oke uzo
Orlistat raw ntụ ntụ nwere ike ịbụ ntakịrị irè karịa sibutramine na mbenata ibu ahụ. Ọ bụ ezie na mkpụrụ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ na-edoghị ahụ na sibutramine enweghi obi abụọ na-efu, mmetụta dị mma. Onweghi akwukwo ahihia, ma obu sibutramine nwere ike ime ka ndi mmadu buru oke ibu.
Enwekwu uru ahuike
Orlistat raw ntụ ntụ nwere ike ịdị ike karie ka mma glucose ọbara.
Orlistat raw ntụ ntụ na-akwalite oke mgbatị nke cholesterol dum6.
A na-ejikọta ọgwụ edozi ngwangwa ahihia ma ọ bụ listi na nkwụsị nke nta mgbali elu
Sibutramine nwere ike ime ka ọbara mgbali elu na ụbụrụ obi4 Na ndị ọrịa na-arịa ọrịa ọbara na-enwe ọbara mgbali elu, sibutramine na-egosi ka ọ na-eme ka ọbara mgbali elu ma ọ bụrụ na ndị ọrịa anaghị belata ihe oriri caloric.
Abụọ ọgwụ nwere nkwanye profability profaịlụ. Sibutramine bụ nke a na-edozi karịa ka ọ na-edozi mkpụrụ ntụ. Ma, a na-agwa ndị na-arịa ọrịa nkwonkwo, a na-enwe nkụda mmụọ obi, arrhythmias, ọrịa strok, ma ọ bụ ndị na-anata ọgwụ mgbake.
Mmetụta ndị kachasị emetụta ya na nchịkọta nkuzi ntụsara ahụ bụ ntụnye mmanu, ịdị ọkụ n'obi na ime ngwa ngwa. Na mmetụta ndị sibutramine bụ isi ọwụwa, ọnụ ala na anorexia. Sibutramine nwekwara ike iweli mgbali elu na mkpali obi.
Mpaghara 16.FA & Q
Q1: Achọrọ m ida ibu?
A1: Ọ bụrụ na ọ na-agụ gị agụụ oge nile ọ bụ ezie na ị na-eri nri, ma ọ bụrụ na ị na-enwe nkụda mmụọ mgbe ị na-eji ejiji, ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ọbụna ịkwaga, ọ bụrụ na ị na-eche mgbe niile na ịchọrọ onwe gị banyere ụdị gị, ....... banyere abụba abụba.
Ibu oke bu ihe ojoo n'ihi na ibu ibu na eme ka ihe ozo di n'ime obi gi. O nwere ike iweli mgbali elu na cholesterol ma nwee ike ibute ọrịa shuga. Ibu ibu bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji belata nsogbu nke obi na ọrịa ndị ọzọ.
Q2: Olee otu m ga-esi ghara ibu ibu?
A2: A na-enwekarị ụzọ nkịtị 3 iji hapụ abụba, atụmatụ nri, atụmatụ mmega ahụ, ngwaahịa na-abaghị uru.
Maka nri nri, na - abụkarị Nri nri ụtụtụ na - edozi ahụ; Zere ihe ọṅụṅụ na - egbu egbu na ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi; Ịhọrọ ihe oriri na - adịghị mma (lee ndepụta); Iji obere efere, rie obere ma ọ bụ ọbụna ihe ọ bụla,
Maka atụmatụ mmega ahụ, na-agakarị na-eri nri, na-agba kwa ụtụtụ;
Maka ụzọ abụọ mbụ, ana m eche na ọtụtụ ndị mere nke ahụ na mbụ, mana ọ gaghi enwe ọganihu, ọ bụrụ na ị bụ onye nọgidere, ị nwere ike ịnwale nke ahụ, ma maka ọtụtụ ndị mmadụ, ọ na-abụ na ọ bụ ụzọ kachasị mma ka ị ga-esi nweta ngwaahịa ụfọdụ. :
Belata agụụ gị.
Mee ka ị daa ngwa ngwa, n'enweghị agụụ.
Mee ka ahụike gị dịkwuo mma n'otu oge ahụ.
Q3: Kedu ụdị ihe ndị na-abaghị uru na-abaghị uru ka m ga-ewe?
A3: N'ahịa, e nwere ihe dị iche iche na-abaghị uru, ụfọdụ nwere ike ida ngwa ngwa ngwa ngwa kamakwa nwere mmetụta dị egwu, ụfọdụ na-enwe mmetụta dị nta, na-efunahụ mmiri na ahụ gị ma gaghachi. enweghị mmetụta ọ bụla, Orlistat raw powder is just such products, ụfọdụ ndị na-ewere Orlistat raw ntụ ntụ na Orlistat ntụ ntụ, nke bụ amde nke isi mmalite.
Q4: Orlistat ntụ ntụ dị mfe iji?
A4: Orlistat raw powder powder is different from other forms, ọ bụ nke dị ọcha dị ọcha ma dị mfe iji, ma ọ bụrụ na ị bụ abụba ngwaahịa na-emepụta, ị nwere ike itinye Orlistat ntụ ntụ ka kọfị, candy, na ihe ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na onye ọrụ onwe onye , anyị nwekwara ike iburu ya. Ọtụtụ ndị na-azụta Orlistat ntụ ntụ online ma tinye ya na kọfị ma ọ bụ were ya ozugbo mgbe nri.
Q5: Ebee ka m nwere ike ịzụta oke ọcha Orlistat ntụ ntụ?
A5: O siri ike ịzụta Olistat ntụ ntụ na ụlọ ahịa, Ị nwere ike ịzụta Olistat ntụ ntụ online online.List dị ọcha Olistat ntụ ntụ ga-enwe obere mmetụta, ọbụna dị ize ndụ, ya mere ịzụta dị ọcha Olistat, 99% Olistat, họrọ a pụrụ ịdabere na soplaya bụ a must.If ị nwererịrị, ị nwere ike ịzụta, were ya n'ụzọ dị mfe .Ọ bụrụ na ị maghị, ihe ndị a na-akwado m, ị nwere ike ịchọta oke ọcha Orlistat site na ụlọ ọrụ AASraw.
17.Price nke Orlistat raw ntụ ntụ na Olistat ntụ ntụ
Orlistat raw powder price, Dị ka ihe anyị kwuru tupu, na ahịa, e nwere ụdị dị iche iche nke orlistat, ụdị mbadamba, ụdị capsule, ụdị ntụ, ụdị mpi, dị iche iche, nke a na-ejikarị eme ihe bụ 120mg, ahịa ahịa nke 120mg capsule bụ 380 Rupee / 120mg, nke bụ 58USD / 1g, ọnụahịa ahịa nke mbadamba, nke na-emekarị izu 12 (mpịakọta 252) = £ 149.99 = 201.68USD
Ma maka ntụ ntụ, 99% dị ọcha, dịka ọmụmaatụ, na 99% ịdị ọcha steroidssupplier SZOB 40USD / 10G, 10g, nke nwere ike ime ka ọtụtụ puku mbadamba, mkpụrụ ọgwụ, ihe dị ịtụnanya!
18.Buying Olistat ntụ ntụ online
Mgbe ị na-atụle ma ọ bụ kpebie ịzụta Ossat ntụ ntụ na weebụ, ị ga-eche echiche banyere ajụjụ ole na ole dị ka: ụdị ụdị ọcha ị chọrọ maka Olistat ntụ ntụ, maka ndị mmadụ na-eji ma ọ bụ anụmanụ, na ọnọdụ nkịtị usoro maka ọgwụ nke mmadụ-eji nwere ike ịbụ 99% ịdị ọcha, ọ nwere ike ịbụ ọnụ dị oke ọnụ, ma ọ bara uru maka iji ya. Ọ dịkwa mkpa ka ị chee banyere ego ị ga-anabata. N'ahịa, ụgwọ nke 99% ịdị ọcha Olistat ntụ ntụ dị gburugburu 1000USD / 1kg, mana maka ịfefe , mee ka anyị niile mara na ọnụahịa ahụ na-adaberekwa n'ogo na quality.Besides, mgbe ị na-ahọrọ Olistat powder supplier na-arụkọ ọrụ ọnụ, ịkwesịrị ịdị na-eche banyere ụfọdụ ihe ndị dị ka, kedu ụdị ọnụego, ụdị ụdị mbupu maka gị ịhọrọ, ma ha nwere iwu nke nnweta, ihe ha ga - eme ma ọ bụrụ na omenala ha jidere, ka ha ga - edozi nsogbu ụfọdụ maka gị? Ọrụ ha dị mma?
Mgbe Ị tụlechara ihe ndị a niile, họrọ onye kwesịrị ekwesị iji kwado ya.
19.Olee otú ịzụta dị ọcha dị ọcha Olistat ntụ ntụ si AAS
Ejighariri ihe omumu nke biotechnology nke ohia na 2008, bu nke 5 Chinese Ph na-acho ya na XNUMX Chinese Ph. Dọkịta, ndi a na-acho na Chemical Engineering na Mahadum Tulsa, Oklahoma, USA..Main ngwaahịa: anabolic steroid raw raw , nkwonkwo ahụ, nkwonkwo, ụfụ abụba, hormones sex, SARMS, PCT ọgwụ, HGH, homebrew, ugl.When ị kpebiri ịzụta Olistat ntụ ntụ si AAS, ihe ị ga - eme bụ:
1.Visit anyị weebụsaịtị, họrọ ngwaahịa ịchọrọ, ma hapụ ozi gị na ozi na weebụsaịtị anyị, ndị ahịa anyị ga-azaghachi gị na 12 awa mgbe ị natara ozi gị, wee kọwaa nkọwa.
2.Just zipu ozi-e ma ọ bụ zipu ozi na whatsapp na ndị na-arụ ọrụ na AAS, dịka Demi, mgbe ahụ na-ekwu n'ụzọ zuru ezu, banyere ịdị ọcha, oke, Mbupu, adreesị, họrọ ego kwesịrị ekwesị, a ga-eziga ihe n'ime 12 awa mgbe ịkwụ ụgwọ , mgbe ị kwụrụ ụgwọ, ị ga-enweta nọmba nchịkọta ọnụ, onye ahịa anyị ga-edebekwa gị oge, mgbe ahụ ọ dị gị mkpa ịnọdụ ala, chere maka ngwugwu gị.
3.AAS bụ ụlọ ọrụ dị na China, maka nchekwa, ọ bụrụ na ị nwere enyi na China, ị nwekwara ike ikwe ka ndị enyi gị gaa na ụlọ ọrụ anyị, na-ekwu okwu zuru ezu, ma nweta ihe ị chọrọ.
Olistat enwere nchekwa ma dị irè?
Ọnwụ ngwa ngwa ngwa ngwa: Ụdị ụdị ntụ ntụ na-adịrị gị mma?
Zụrụ Testosterone Enanthate ntụ ntụ na nnukwu Ịzụta Methenolone Enanthate ntụ ntụ: adịghị ịzụta ya tupu ị mara ndị a !!!